Masar ayaa eedeysay basaasiin Isra'el - BBC Somali
Masar ayaa eedeysay basaasiin Isra'el
Image caption khariidada Masar iyo Israel
Xeer ilaaliyaha dowladda Masar waxaa uu ku dhawaaqay in daboolka laga qaaday shabakad basaasiin ka hawl gelaysay dalka Masar gudihiisa. Hal qof oo Masar u dhashay iyo labo reer Isra'el ah ayaa lagu eedeeyay inay warar u gudbinayeen hay'adda nabadsugidda Isra'el, ayna ka shaqeynayeen arrimo ka soo horjeeda danaha qaranka Masar.
Xeer ilaaliyaha guud waxaa uu sheegay in hal qof oo reer Masar ah la xiray, laakiin labada reer Isra'el aysan hadda dalka Masar joogin. Saraakiil reer Masar ah waxay sheegeen in basaasiinta lagu eedeeyay inay xafiisyo isgaarsiineed ka furanayeen dalalka Masar, Britain, Isra'el iyo Gaza, ayna qorsheynayeen afduubyo lagu sameeyo dad dalxiiseyaal ah oo u dhashay waddammada Shiinaha iyo Japan oo ay ka qafaashaan lama degaanka Sinai.
Wargeysyada ka soo baxa dalka Masar waxay sheegeen in sidoo kale dhexda laga qabtay hadallo telefoonno saraakiil sare oo reer Masar ah. Wargeysyadu waxay sheegeen in sharikadda telefoonnada gacanta ee Mobinil la eddeeyay, hase ahaatee Mobinil way beenisay inay wax basaasnimo ah ku lug yeelatay.
Isra'el way ka gaabsatay inay ka hadasho arrintan. Horraantii sanadkan nin madax ah oo ka tirsan sharikadda telefoonnada gacanta ee dowladda Lubnaan leedahay ee la yiraa Alfa, ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu Isra'el u basaasayey, una oggolaanayay reer Isra'el inay tilmaansadaan meesha ay ku sugan yihiin kaddibna dilaan shakhsiyaad ay doonayeen intii uu socday dagaalkii 2006-dii.